Tag: megauploads | Martech Zone
Axad, Maarso 4, 2012 Axad, Maarso 4, 2012 Douglas Karr
Warshadaha muusikada iyo burcad badeeda, warshadaha filimada iyo durdurrada, wargeysyada iyo wararka internetka. Maxay waxaas oo dhami iskaga mid yihiin? Sahay, dalab iyo suuq wareegaya. Anigu waxaan ahay taageere weyn oo hanti-wadaaga oo aan xoogaa u janjeero dhinaca libertarian-ka dhinaca siyaasadda. Waxaan aaminsanahay in suuqyada xorta ahi had iyo jeer helaan jihada saxda ah ee loogu dhaqaaqo. Mar kasta oo aan arko dowladda oo wax ka qabanaysa burcad-badeednimada, la wadaaga faylalka iyo tahriibinta ayaan qamarataa.
Sabtida, Diisambar 22, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Dhowr toddobaad ka hor waxaan bilaabay inaan akhriyo Beddelka Weyn ee uu qoray Nicholas Carr. Waa tan qayb ka mid ah goobihii ka dhintay: Boqol sano ka hor, shirkaduhu waxay joojiyeen inay awooddooda ku soo saaraan matoorada uumiga iyo firfircoonida waxayna ku xirmeen shabakadda korontada ee dhowaan la dhisay. Awoodda raqiiska ah ee ay soo saaraan korontada korontada kaliya ma badalin sida ganacsiyada u shaqeeyaan. Waxay dejisay falcelin silsilad ah oo ku saabsan isbeddellada dhaqaale iyo bulsho ee keenay dunida casriga ah